हातखुट्टा बाहिर राखेर आउनुस् भन्न मिल्दैन : गृह प्रवक्ता - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०३, २०७८ समय: ७:३३:२३
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडलको अध्यक्षतामा भएको मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएकोबारे सर्वपक्षीय छलफबाट फर्किने क्रममा काठमाडौं मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्मामाथि विद्यार्थीहरूले अभद्र व्यवहार गरेको घटनाले सिंहदरबारसमेत असुरक्षित भएको महसुस हुन थालेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट फर्किने क्रममा काठमाडौं मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्मामाथि विद्यार्थीहरूले अभद्र व्यवहार गरेको घटनाले सिंहदरबारसमेत असुरक्षित भएको महसुस हुन थालेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयकै सामुन्नेमा देशको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको दायित्व बोकेर बसेको गृह मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयको झ्यालबाटै शिक्षा मन्त्रालयको सबै गतिविधि देख्न सकिन्छ । तैपनि शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता सकेर फर्किंदा मेडिकल कलेज सञ्चालक डा. शर्मामाथि अभद्र व्यवहार भयो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले निशंकोच भन्नुभयो– ‘घटना त भयो तर सुरक्षा टोलीले तत्कालै अभद्र व्यवहारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको छ । के गर्ने वार्ता होस् वा अन्य कुनै पनि कार्यक्रम, सिंहदरबार प्रवेश गर्नेलाई हातखुट्टा बाहिर राखेर आउनुस् भन्न त मिल्दैन ।’ उहाँले अझै गर्वसाथ भन्नुभयो– ‘हामीले सिंहदरबारमात्रै होइन देशभर सुरक्षा दिएका छौं ।’
सिंहदरबारमा यस्ता घटना पहिलोपटक भएको होइन । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा शिक्षक कर्मचारीले धर्ना दिएका थिए । तर, गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी प्रवक्ता कोइराला गैरजिम्मेवार उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ– ‘पूर्ण सुरक्षित भएको ह्वाइट हाउसमा त यस्ता घटना भएका छन् । त्यहाँ पनि घटनामा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही भएको छ । घटनालगत्तै एक्सन लिनुभनेकै सफलता हो । हामीले मन्त्रालयमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थियौं । केही हुन पाएन ।’ यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।